Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka i-Deepin 15.4 | Kusuka kuLinux
Umphumela wokuhlolwa I-Linux Deepin 15.4 Kube ngaphezulu kokugculisayo, i-distro enokubukeka okuhle kakhulu okubonakalayo, ngokusebenza okwamukelekayo nangokuhlukahluka kwezicelo ezifakwe ngokuzenzakalela. Manje, noma ngabe i-distro ikulungele ukusetshenziswa yinoma yimuphi umsebenzisi, singenza okunye ukulungiselela ngemuva kokufaka i-Deepin 15.4 sizoyibona ngokulandelayo.
1 Yini okusha in Deepin 15.4?
2 Okunye ukucatshangelwa okufanele kucatshangwe ngaphambi kokuqala umhlahlandlela
3 Izinyathelo okufanele zenziwe ngemuva kokufaka i-Deepin 15.4
3.1 Vuselela amakhosombe e-deepin aye kwamukeleka kakhulu endaweni yakho.
3.1.1 Vuselela uhlelo nezinqolobane:
3.1.2 Faka abashayeli abaphethe:
3.1.3 Faka iSynaptic
3.1.4 Shintsha ulimi lube yi-wps
3.1.5 Faka amafonti ewindows:
3.1.6 Thola okuningi esitolo se-deepin
Yini okusha in Deepin 15.4?
Mina uqobo ngiyacabanga Deepin enye ye-distro enhle kakhulu yamaShayina engiyibone esikhathini eside, njengoba inokubukeka okuhle kakhulu kwanamuhla ukuthi iyazi ukuxubana nokusebenza okuhle nesoftware ebuyekeziwe. Ngokufanayo, i-distro iza ifakwe isikhungo sokulawula esithuthukile esizosivumela ukuthi silinganise futhi silungiselele i-distro yethu kokuthandayo.
Ithimba lokuthuthukiswa kwe-deepin linakekele yonke imininingwane kule distro entsha, kusuka kusixhumi sayo sokufaka esinokutholwa okuhlakaniphile, ukuskena ikhodi ye-QR nemiyalezo mayelana ne-distro. Ngokufanayo, bangeze i-Linux kernel 4.9.8 kule distro ukuze babe nokuxhaswa okwandisiwe kakhulu kwehadiwe.
Ideskithophu ye-deepin 15.4 imane nje inhle, inezithonjana zokufinyelela ngokushesha, ibha yamathuluzi eguquguqukayo, imenyu yokwenza ngokwezifiso eziphambili, phakathi kwezinye izici.
Ngincoma ukuthi ubone okunye kokubuyekezwa okujulile kwe-deepin lapho izici zayo nobuhle bale distro bunemininingwane.
Deepin 15.4 Kuyi-distro esekwe kudian nedeskithophu yangokwezifiso, ngakho-ke iningi lezinhlelo zokusebenza, imihlahlandlela nemiyalo eyenzelwe futhi yathuthukiselwa lo msebenzi we-distro e-deepin.
Ngokuya ngehadiweware yakho, okunye ukusebenza kwe-deepin kungahle kungasebenzi kahle, uma kunjalo cela ukubike.
Izincomo esizibonisa ngezansi kumele zenziwe ngokuzibeka wena engcupheni, zingumphumela wesipiliyoni sethu kanye nokufundwa kochwepheshe abahlukahlukene kulo mkhakha.
Izinyathelo okufanele zenziwe ngemuva kokufaka i-Deepin 15.4
Vuselela amakhosombe e-deepin aye kwamukeleka kakhulu endaweni yakho.
Lesi yisinyathelo engisibona sisemqoka ngemuva kokufaka i-deepin ngoba izinqolobane ezenziwa ngokuzenzakalela zihamba kancane emazweni amaningi angaphandle kwezwekazi lase-Asia, ungazama ukushintshela kokunye kokugcina okukhona kuhlu ukuthi i-deepin isinikeza ngezinketho zokubuyekeza (ngincoma eyodwa evela eBrazil), kepha i-elav nayo yabelana ngosuku olwedlule uhlu lwamanye ama-mirros ongawasebenzisa nengabelana ngawo ngezansi
Ukwengeza la makhosombe kufanele sihlele imithombo yolwazi ukwenza lokho ukwenza lo myalo olandelayo: sudo nano /etc/apt/sources.list
neMelika: I-United States, Mexico, Dominican Republic, Puerto Rico, njll.
deb ftp://mirror.jmu.edu/pub/deepin/ okungazinzile okuyinhloko okufaka isandla okungakhokhelwa kwe-deb ftp://ftp.gtlib.gatech.edu/pub/deepin/ okungazinzile okuyinhloko okunikela nge-deb ftp yamahhala: // isibuko .nexcess.net / deepin / engazinzile main don non-free
deb ftp://deepin.ipacct.com/deepin/ main engazinzile main don non-free deb ftp://mirror.bytemark.co.uk/linuxdeepin/deepin/ engazinzile main don non-free deb ftp: //mirror.inode .at / deepin / okungazinzile okuyinhloko okufaka isandla ngaphandle kwamahhala
deb ftp://mirror.bytemark.co.uk/linuxdeepin/deepin/ okungazinzile okuyinhloko okunikela nge-deb ftp://ftp.mirrorservice.org/sites/packages.linuxdeepin.com/deepin/ okungazinzile okuyinhloko okufaka isandla okungekho mahhala
deb ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/linuxdeepin/ okungazinzile okuyinhloko okunikela nge-deb ftp://mirror2.tuxinator.org/deepin/ okungazinzile okuyinhloko okunikela nge-deb ftp: //ftp.fau /
Vuselela uhlelo nezinqolobane:
Masenze umyalo olandelayo kusuka ku-terminal yethu:
Ungakwenza futhi kusuka kusixhumi esibonakalayo sokucushwa, kunketho yokuvuselelwa kwesistimu. Ungasebenzisa ngokunenzuzo futhi uvume ukuseshwa kwezibuyekezo ezizenzakalelayo.
Faka abashayeli abaphethe:
Imvamisa sidinga abashayeli abaphethe ukuze ikhompyutha yethu isebenze kangcono, uma kunjalo singakwazi ukuyifaka ngale ndlela elandelayo, ngoba lokhu simane sivule uhlelo lokusebenza lwemenenja yokushayela olufakwe yi-deepin ngokuzenzakalela, faka iphasiwedi yethu bese ukhetha amashayeli atholakalayo yekhompyutha yethu.
Yize imakethe ye-Deepin kulula ukuyisebenzisa futhi inenqwaba yezinhlelo zokusebenza, ngicabanga ukuthi i-synaptic iyindawo yokugcina ephelele yezicelo ngakho-ke ngincoma ukufakwa kwayo, ngoba lokhu kwanele ukuthi silande inguqulo ye 32 izingcezu o 64 izingcezu okuhambelana nokwakhiwa kwakho bese ufaka usebenzisa i-gdebi, noma enye imenenja yephakeji.
Shintsha ulimi lube yi-wps
Iphakheji yehhovisi elethwa yi-deepin ngokuzenzakalela yi-wps, kufanele siguqule ulimi lube yiSpanishi ukuze yamukele zonke izinhlamvu zolimi lwethu futhi umqondisi asebenze kahle.
Ukuze wenze lokhu, vele uvule i-wps bese uya kuphaneli eliphezulu elingakwesobunxele lapho uzoba nenketho ethi shintsha ulimi (shintsha ulimi), sizobheka ulimi (noma ulimi lwesifunda) esilifunayo bese silwamukela, iphakethe elihambisanayo lizolandwa futhi nolimi luzoshintsha.
Faka amafonti ewindows:
Singakwazi ukufaka amafonti windows ngomyalo olandelayo
sudo apt-get ukufaka ttf-mscorefonts-isifaki ttf-bitstream-vera ttf-dejavu ttf-liberation ttf-freefont
Thola okuningi esitolo se-deepin
Okuthile okune-deepin isitolo esihle kakhulu, esihle, esihlelekile, esisheshayo, esinenombolo enkulu yezicelo nokufakwa okulula, isincomo sami siqu ukuthi sizuze kakhulu kulesi sitolo, sifuna izinhlelo esingazazi, esizivivinya noma esizifakayo izinhlelo zokusebenza ezisetshenziswa kakhulu.
Ngalezi zinguquko ezincane sizoba nokujula okuningana, ukuthi uma siqala ukuguqula ezinye izinto, okuthile okuzokhiqiza ngokwengeziwe kuzophuma nakanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka i-Deepin 15.4
Kuhle, kuhle kakhulu !!
Sanibonani. Nginenkinga engingakwazanga ukuyixazulula ku-Deepin 15.4, okuyividiyo edabukile, ngine-graph ehlangene ye-Intel, ngethemba ukuthi kukhona ongangisiza, ngiyabonga.
Nginenkinga efanayo angikwazanga ukuyixazulula
Isifundo esihle kakhulu sizosiza abafikayo ku-distro, kepha kufanele ngikucacisele okuthile nokuthi i-Synaptic ifakiwe esitolo se-deepin, ungayifuna bese uyifaka kusuka lapho. Futhi kunezinhlelo zokusebenza eziningi ezitholakala kuphela nge-synaptic.
Ukubuyekeza amakhosombe akudingeki kube nzima njengoba enza nge-terminal, nansi ikhambi elilula kakhulu
ekugcineni ngishiya ividiyo echaza ngendlela enhle, ukuthi yini okufanele uyenze ngemuva kokufaka i-deepin?
kanye nokubuyekezwa okusemthethweni kwe-deepin 15.4
Ngiyabonga ngokusebenzisana nalokhu kusatshalaliswa kwamaShayina, ngivela ku-OpenSUSE 42.2 (KDE neCinnamon) engiphoxa ngoba ihamba kancane futhi ayinzima. Okwamanje, i-Deepin efakiwe nje ilungile kepha ukuyivimba ukuthi ingashiyi lapho usebenzisa i- "sudo apt-get update && apt-get upgrade":
E: Ayikwazanga ukuvula ifayela lokukhiya "/ var / lib / dpkg / lock" - open (13: Imvume inqatshiwe)
E: Yehlulekile ukukhiya umkhombandlela we-admin (/ var / lib / dpkg /), ngabe ungumsebenzi omkhulu?
Ngisebenzise: "sudo su" beka iphasiwedi yami bese ngibhala: "apt-get update && apt-get upgrade" futhi ngokushesha isibuyekezo siqala, impela ngiqale ngaya e-Control Center (ekhoneni elingezansi kwesokudla) futhi ukusuka lapho ku- "Update / Buyekeza izilungiselelo »Ngishintshe isibuko saba esisheshayo sendawo yami.
Futhi ngemuva kokubeka imithombo yokuphathelene okufanele uyibeke: Sudo fc-cache
Angiyena uchwepheshe, ngimane ngifisa ukwazi nge-GNU / Linux futhi ngihlale ngiyithanda i-KDE, ngifunde konke kusuka kuma-athikili nakokufundisa okufana nokwakho.
Udinga ukucacisa i-Sudo ngazo zombili izikhathi futhi ukutholwa kwe-apt akudingeki futhi. "Sudo apt update && sudo apt upgrade"
Sawubona, okokufundisa okuhle kakhulu, nginenkinga, ngifaka i-deepin kepha ayingivumeli ukuthi ngigcine noma ngisuse amadiski e-ntfs noma ukwahlukanisa, kufaka ukhiye kukho konke lokhu futhi angazi ukuthi ngingaxazulula kanjani le nkinga, ngilinde impendulo futhi kusukela manje kuqhubeke, ngiyabonga . Jabulela
UDarwins Torres kusho
Sawubona ntambama, zama ukususa inketho yokuqala esheshayo kuzinketho zamandla wewindows, qala kabusha ku-deepin futhi kuphelele lapho
Phendula uDarwins Torres
UCarlos Luciano Figueroa kusho
Sawubona, unjani? Nginencwajana ye-cx ene-i7 16gb yenqama nekhadi lemidwebo le-Intel hd kanye nenye evela ku-nvidia 940mx. Ngiyayithanda i-Deepin 15.4 kepha angikwazi ukulungisa inkinga yokuvuselela nge-GUI. Njalo lapho icela ukuqala kabusha ukuvuselela, ngiyayenza kepha inika isikhashana ku-0% futhi inikeze iphutha, yize izama kabusha iyaqhubeka nento efanayo. Ngivuselele nge-terminal. I-msg ivela ekugcineni: 0 kuvuselelwe, kuzofakwa i-0 entsha, 0 kuzosuswa bese ama-52 kungavuselelwa. Iphutha elifanayo ngokusobala alingivumeli ukuthi ngilande futhi ngifake ezinye izinhlelo zokusebenza esitolo, ngoba nazo zinikeza iphutha. Izinqolobane zivela ezweni lami futhi zisebenza ngejubane lami elijwayelekile lokuxhumeka kwe-20mb. Ngingaxazulula kanjani leyo nkinga? Bengilokhu ngifuna futhi ngifuna imininingwane ngakho kepha ngisha kuLinux futhi konke kubiza kabili. Okokuqala, ngiyabonga kakhulu ngeminikelo yakho nesikhathi osisebenzisile. Halala!
Phendula uCarlos Luciano Figueroa
Landela izinyathelo ukushintsha amakhosombe aseBeijing asemthethweni asondele ezweni lakho
UMarcelo Orlando kusho
Ngaphandle kokwenza okushiwo nguDarwin Torres, kulula ukufaka i-apt-fast (Kudinga ukufaka i-aria2). Uma ukuthola kunzima kakhulu ukufaka konke kusuka ku-terminal, ungalanda i-.deb ye-prozilla ne-apt-proz (Yize ihamba kancane). Le software ikuvumela ukuthi usheshise inani lokuxhumeka, okwenza ukulanda kusheshe.
I-PS: Uma uthatha isinqumo sokufaka ngokushesha, kufanele usebenzise imanuwali ukuyifaka ku-Debian, hhayi ku-Ubuntu.
Phendula uMarcelo Orlando
Ibhulogi yakho yinhle kepha ngiyethemba uzongitshela ukuthi amakhosombe wokufaka ku-deepin avuselelwa kanjani ngoba i-sudo engeza-apt-repository ppa: ayisebenzi noma ayibuyekezi.
Ekucushweni, esigabeni sokubuyekeza, uhlu lwezibuko luvela lapho ungakhetha khona eliseduze nezwe lakho
I-Deepin ayihambisani ne-ppa njengoba isuselwa ku-Debian hhayi ku-Ubuntu. Kepha ungawafaka lawa mapakeji nge- "Aptik", ungawathola esitolo se-Deepin, encazelweni ithi ikuvumela ukuthi ufake amaphakheji wesoftware afana ne-ppa.
Yebo, ngizamile futhi ayidonselanga 🙁
UCarlos Flores kusho
Sawubona, okokufundisa okuhle kakhulu. Umbuzo ku-deepin 15.4 wami anginawo umyalo we-DEB ofakiwe. Ngingayifaka kanjani ???
Phendula uCarlos Flores
ukuze ukwazi ukuphatha amafayela we-.DEB kufanele ufake i-gdebi
Uxolo nginenkinga, ngifaka i-deepin 15.4, ngivuselela yonke into, kepha lapho icinyiwe futhi ivuliwe, idokodo nesiqalisi kwasuswa futhi angikwazanga ukukulungisa, ngidinga usizo